जीवन बीमा - Beemapost.com
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सिईओ नियुक्ति गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बीमा समितिले सपष्टिकरण मागेको छ। बीमा समितिले केही समयअघि रिक्त पदमा ६ महिनाभित्र नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएपनि कम्पनीले अटेर गरेको भन्दै सपष्टीकरण मागेको हो । बीमा समितिद्धारा...
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ब्यतित बीमालेखको पुनर्जागरण गराउँदा लाग्ने ब्याजमा छुट प्रदान गर्ने भएको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित कम्पनीबाट जारी भई विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा बीमाशुल्क बुझाउन विलम्ब भई ब्यतित भएका बीमालेखहरुमा सबै प्रक्रिया...
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय विभिन्न अवसरहरुमा बीमा पोलिसी उपवहार दिने प्रचलन बढ्दै गईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा जन्मदिनको अवसरमा चाँदनी रेष्ट्रो, हाकिम चोकका होटल व्यवसानिय दिपक कुमार खत्रीले श्रीमती सृजना खत्रीलाई २५ लाख बराबरकोे सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसी...
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ओखलढुङ्गा शाखाका डिएम अशोक दाहाल वैशाख २८ गतेदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको कम्पनीले जनाएको छ । रिलायबल लाइफले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै दुई तिन महिनायता कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएका कारण निजसँग सम्बन्धित...
आइएमई लाइफले माग्यो सातै प्रदेशबाट ६७ जना ब्रान्च म्यानेजर, कति चाहिन्छ शैक्षिक योग्यता ?
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले रोजगारीको अवसर खुलाएको छ । कम्पनीले सूचना प्रकाशित गर्दै सातै प्रदेशबाट शाखा प्रमुखहरु माग गरेको हो । प्रभु लाइफले प्रदेश १ अन्तर्गत १५ वटा शाखा कार्यालयका लागि, मधेस प्रदेश अन्तर्गत ११ वटा शाखा...
नेपाल लाइफको बीमा किस्ता आइएमई पेमार्फत भुक्तानी गर्दा क्यासब्याक अफर
काठमाडौं । अनलाईन डिजिटल भुक्तानी माध्यम ‘आइएमई पे’ले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा किस्ता आइएमई पे एपमार्पmत भुक्तानी गर्दा क्यासब्याक अफर ल्याएको छ । आइएमई पे ले नेपाल लाइफको बीमा किस्ता उक्त एपमार्फत तिर्ने सेवाग्राहीहरुका निम्ति सो अफर ल्याएको हो...
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जन १ खर्ब १९ अर्बमाथि, कुनको कति ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ) सम्मको प्रिमियम हो । यसअवधिसम्ममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले...
नेपाल लाइफको गाईघाट शाखाद्धारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
काठमाडौं। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी गाईघाट शाखाले बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अन्तर्गत मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा त्रियुगा नगरपालिका वडा नं।११ घर भएका स्व।अमृत कटुवालको कातारमा मृत्यू भएकोमा निजले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा गरेको रु...
123 … 145 Older >>